ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်းမှာလှုပ်သောငလျှင်များ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ ၄၄ မိနစ် ၅၈ စက္ကန့် တွင် ရန်ကုန်မြို့၏ အနောက်တောင်ယွန်းယွန်း မိုင် ၄၂၅ မိုင်ခန့် ၊
ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်း ၅.၃ အဆင့် ငလျှင်တစ်ခုထပ်မံ၍လှုပ်သွားကြောင်းသိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဒေသအတွင်း ဇူလိုင်လ ၂၆ ၊ ၂၇ နှင့် ၂၈ ရက်နေ့များတွင်
အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသည့် ငလျှင်လှုပ်ခတ်မှုပေါင်း ၂၅ ကြိမ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။
Tuesday, July 28, 2009 at 05:14:58 UTC
Tuesday, July 28, 2009 at 11:14:58 AM at epicenter
180 km (110 miles) SE of Port Blair, Andaman Islands, India
315 km (195 miles) NNE of Misha, Nicobar Islands, India
770 km (480 miles) WSW of BANGKOK, Thailand
2640 km (1640 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
NST= 25, Nph= 25, Dmin=>999 km, Rmss=1.39 sec, Gp= 76°,
Posted in eclipse, Quakes. Tags: earthquake. 1 Comment »
One Response to “ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်းမှာလှုပ်သောငလျှင်များ”
ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ မြန်မာစံတောချိန်နဲ့ ညနေ ၃ နာရီ ၁၃ မိနစ် ၄၈ စက္ကန့် မှာ ၊ အင်ဒိုနီးရှား ဆူမာတြာကျွန်း အနောက်တောင်ဘက် ၊ ဂျာကာတာမြို့တော်ရဲ့ အနောက်ဘက် ၃၅၅ မိုင်အကွာ ၊ မြေအောက် ၂၁.၇ မိုင်မှာ ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅.၉ ရှိတဲ့ ငလျှင်တစ်ခု ထပ်မံ လှုပ်သွားကြောင်းသတင်းရှိတဲ့ အတွက် ဆက်လက်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Date-Time Tuesday, July 28, 2009 at 08:43:48 UTC
Tuesday, July 28, 2009 at 03:43:48 PM at epicenter
Location 5.482°S, 101.624°E
200 km (125 miles) SSW of Bengkulu, Sumatra, Indonesia
405 km (250 miles) W of T.-Telukbetung, Sumatra, Indonesia
570 km (355 miles) W of JAKARTA, Java, Indonesia
785 km (490 miles) SSW of SINGAPORE
Event ID us2009jqaw
« သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများ
ကပ္ပလီပင်လယ်မှ ငလျှင်များအကြောင်း ဆက်လက်လေ့လာခြင်း »